DAAWO SAWIRADA Ninka Adduunka ugu Cidiyaha Dheer oo aan Cidiyaha Iska Jarin ilaa 1952kii | shumis.net
Home » Layaab » DAAWO SAWIRADA Ninka Adduunka ugu Cidiyaha Dheer oo aan Cidiyaha Iska Jarin ilaa 1952kii
DAAWO SAWIRADA Ninka Adduunka ugu Cidiyaha Dheer oo aan Cidiyaha Iska Jarin ilaa 1952kii
Ninka ugu cidiyaha dheer adduunka oo u dhashay dalka Hindiya, ayaa sheegay inuu qorshaynayo inuu cidiyaha iska jaro, kadibna ugu deeqo masxaf lagu ururiyo waxyaabaha taariikhiga ah.
Ninkan oo 78 jir ah, lana yidhaa Shridhar Chillal, ayaa cidiyaha gacantiisa bidix beerayey ilaa markii uu dugsiga hoose ku jiray oo ku beegan sannadkii 1952kii, qof kasta oo arkaana uu aad ula yaabayo dherarka cidiyihiisa oo ka hor istaagay inuu shaqaysto, isla markaana guursado.
Mr. Shridhar waxa si rasmi ah hadda loogu aqoonsaday inuu dhacdooyinka cajiibka galay (Guinness World Record) oo uu noqday qofka cidiyaha gacmahiisu ugu dheer yihiin caalamka (Longest Fingernails on a Single Hand Ever), waliba waxa uu si toos ah ugu soo baxay abaalmarinaha 2016 la bixin doono.
“Markii aan dugsiga hoose dhiganayey, waxa si xun noo garaacay macallinka, waayo saxiibkay baa cidiyaha ka jebiyey, macallinkuna wuxuu la baxay ciddi aad u dheer. Waxa aan waydiinay sababta uu noo garaacay maadaama aan ciddi yar ka jebinay, waxaannu noo sheegay in aanaan fahmayn, maadaama aanaan waligay ciddi la bixin, marka aan cidiyaha la baxnana aan fahmi doono daryeelka ay u baahan yihiin iyo in aan la jebin,” ayuu yidhi Shridhar oo ka hadlayey sababaha ku kellifay inuu cidiyaha intaas le’eg la baxo.
Mr. Shridhar oo tartanka ku galay cidiyaha uu gacantiisa midig u bixiyey waxa ay dherarkoodu noqdeen 909.6 cm, waxana ugu dheer cidida suulka, laakiin markii cidiyahiisu u baxeen waxa soo wajahay dhibaatooyin, waxaannu yidhi; “Ugu horreyn, qoyskayaga ayaa aad uga soo horjeestay, kadibna macallinka ayaa diiday. Waxa aan go’aansaday in aanan waligay jarin cidiyaha.
Carqalaaduhu waxay iga soo wajeheen noloshayda wax kastoo aan damco. Qoyskayagu dhab ahaantii ima ay jeclayn, qofna dharkayga ma maydhi jirin, gacanta ayaanan ku maydhan jiray. Shaqo inaan helo aad bay iigu adkaatay, waayo qofna diyaar umuu ahayn inuu shaqo i siiyo.
”Geesta kale, cidiyahan uu la baxay waxay ka hor istaageen inuu dhallinyaranimadiisa la hasaawo haweenka, waxaannu yidhi; “Markii aan diyaar u noqday guur, gabadhna diyaar umay ahayn guurkayga, waxaanan la kulmay oo aan guur ka dalbaday ugu yaraan 10 ilaa 12 haween ah, balse haddii xataa gabadhu oggolaato guurkayga qoyskooda ayaan oggolaan, haddii qoysku oggolaadana gabadha diidaysay.”
Nasiib wanaag waxa uu guurkii ugu horreeyey helay markii uu 29 jir ahaa, waxaannu guursaday gabadh ay walaalo yihiin xaaska walaalkii.
Waqtigan waxa uu go’aan ku gaadhay inuu cidiyaha jaro, kuna caawiyo maktabad lagu kaydiyo waxyaabaha qadiimiga ah, isagoon shaacin waqtiga rasmiga ee uu jarayo oo uu sheegay inay sir u tahay. “Waxa aan cidiyaha la baxayey laga soo bilaabo 1952kii, waana 62 sannadood marka loo eego waqtigii aan bilaabay in cidiyaha aan la baxo. Xilligan waxaan ahay 78 jir, cidiyuhu da’ ahaan dhibay igu yihiin, waana inaan jara oo aan masxafka ku caawiyaa.
Title: DAAWO SAWIRADA Ninka Adduunka ugu Cidiyaha Dheer oo aan Cidiyaha Iska Jarin ilaa 1952kii